नर्सिङ – Health Post Nepal
भक्तपुरदेखि गंगालाल हृदय केन्द्र जाँदा बाटैमा पर्छ पशुपतिनाथ। सधैं हतारोमा कुद्ने उनको स्कुटर एकदिन तिलगंगाको पुलमा पुगेर टक्क रोकियो। भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर भयावह हुँदाको कहाली लाग्दो अवस्था–घाटकै हाहाकार, छरपस्ट लास, चितामा पुग्न कुरिरहेका शव, अनि आफन्तहरुको रोदन।...
नाम रोजिना खाम्चा, उमेर २० वर्ष । पेशा स्टाफ नर्स । काम तिनाउ गाउँपालिकाको कोरोना अस्पताल । कतिपय स्वास्थ्यकर्मी नै कोरोनाबाट डराइरहेका बेला रोजिना भने कोरोना संक्रमितको उपचारकै बाटो रोजिन। गाउँपालिकाले स्थापना गरेको कोरोना अस्पतालमा उनी इन्जार्ज छिन् ।...
कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर तीव्र हुँदा स्वास्थ्य संस्थामा अक्सिजन, स्वास्थ्यकर्मी तथा शय्या अभाव झेलिरहेका संक्रमितहरु घरमै बस्न वाध्य छन्। उनीहरुको उपचार तथा मनोबललाई कायम राख्न न त स्वास्थ्यकर्मीहरु अगाडि छन् न त अस्पतालमै गएर उपचार गराउन सक्षम छन्। यही...
कोरोना संक्रमणको लडाईमा अग्रस्थानमा रहेका छन्, स्वास्थ्यकर्मी। स्वास्थ्यकर्मीहरुमध्ये पनि अझ शीर्ष स्थानमा छन्, नर्स। नर्स तिनै हुन् जसलाई एक समयमा छुच्ची र रुखो स्वभावकी भनेर चिनिने गरिन्थ्यो। तर, आज नर्स नै भगवान बन्न पुगेका छन्। उनी नै बिरामीका सहारा,...
जब कलिला जीवन सधैका लागि ढल्छन्, एउटा नर्सको मन कसरी सम्हालिन्छ र?
‘जब एउटा जीवन बचाउँछौ तिमी हिरो हुन्छौ तर, जब सयौं जीवन बचाउँछौ अनिमात्रै नर्स बन्छौ’ नर्सबारेमा लेखिएको यही वाक्य एउटा सिङ्गो नर्सिङ जीवनको सारा परिभाषाका लागि काफी छ। सारा विश्व यतिबेला कोरोनाविरुद्धको संघर्षमा होमिएको छ। विश्वव्यापी रुपमा स्वास्थ्य श्रमशक्ति...
कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्टले नेपालको जनजीवन अस्तव्यस्त छ। सरकारले मानिसहरूलाई अत्यावश्यक काम नभएसम्म बाहिर ननिस्कन अनुरोध गरिरहेको छ। तर भगवती रानालाई बिहानै उठेर नहिडी सुखै छैन। निषेधज्ञापछि विहान सबेरै उठनु र हतार हतार काममा जानु उनको दैनिकी बनेको छ।...
स्वाँ…स्वाँ…स्वाँ…।हलभरि विरक्त आवाज सुनिँदैछ। सास लिन निकै कठिनाइ भइरहेको छ। तै पनि जीवनसँग संघर्ष त गर्नु नै छ। सबैको मुखमा अक्सिजन मास्क। कोही बेडमा छटपटाइरहेका त कोही बेड नपाएर भुइँमै लडिरहेका। कोही अस्पतालको ढोकाबाट छड्के नजर लगाउँदै बेड खाली...
मन बेसरी काँपिरहेको छ। दिमाग पनि राम्रोसँग काम गरिरहेको छैन। नहोस् पनि कसरी, आफ्नै अगाडि कलकलाउँदो जीवन सकिएको देखेपछि। भक्तपुर जिल्ला अस्पतालमा नर्सका रुपमा कार्यरत सबिना (नाम परिवर्तन) ले भरसक उनलाई बचाउँन कोसिश गरेकी थिइन्। उनको लागि मनमनै प्राथना...
संक्रमणका कारण २० वर्षिय नर्सको मृत्यु
कोरोना संक्रमणका कारण २० वर्षिय नर्सको मृत्यु भएको छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत नर्सको नेपालगञ्जस्थित भेरी अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। अस्पतालका अनुसार उनको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। उनी तीन महिनाको सुत्केरी थिइन्। कोरोना संक्रमण देखिएपछि...
पवर्तको लंखु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रकी स्टाफ नर्स हुन्, सुरक्षा शर्मा। ट्रमा सेन्टरमा पाँचौ तहबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकी सुरक्षाले करिब २० महिना अघि अति दुर्गममा जाने निधो गरिन्। उनले दुर्गम रोज्नुका पछाडी दुई कारण थिए। दुर्गममा बिरामीको सेवा गर्ने...
प्रदेश २ सरकारले विद्यालय स्वास्थ्य तथा नर्सिङ सेवा परिचालनका लागि नयाँ कार्यविधि जारी गरेको छ । बालबालिकामा विद्यालय तहबाटै स्वास्थ्य, पोषण र वातावरणीय चेतना बढाउँन, सिकाई अभिवृद्धि गर्न, किशोरकिशोरीको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य व्यवस्थापन गर्न र विद्यालयमै प्राथमिकत उपचार...
कोरोना खोप लगाएकी पहिलो नेपाली नर्स भन्छिन् – दिनरात त्रासमा थियौं, अब मन ढुक्क हुँदैछ
कोभिड १९ महामारीले एक वर्षदेखि नै विश्वको आतंक मच्चाइरहेको छ। त्यो आतंकको चुनौती चिर्न लागि खोप विकास भइरहेको छ। केही खोप विश्वका अधिकांश मुलुकमा लगाउन समेत सुरू भइसकेको छ। नेपालमा खोप पाउने पहिलो प्राथमिकतामा कोभिड बिरामीको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी...
भरतपुस्थित बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा कार्यरत स्टाफ नर्स लक्ष्मी जोशी मृत अवस्थामा फेला परेकी छिन्। २३ वर्षीया जोशी चितनवनको कृष्णनगरमा आफ्नै डेरामा सोमबार झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेकी हुन्। अस्पतालकी नर्सिङ इन्चार्ज सविता पन्थीका अनुसार उनी सोमबार ३ बजे...
नर्सिङ संघलाई जिता बरालको जवाफ : ट्रमा घटनामा हीनताबोध छ
नेपाल नर्सिङ संघको आजीवन सदस्य तथा काउन्सिलको सदस्य जिता बरालले ट्रमा सेन्टरमा भएको घटनाप्रति ‘हीनताबोध’ भएको बताएकी छिन्। संघले बराललाई त्यो घटनाका बारेमा असोज २८ गते स्पष्टिकरण मागेको थियो। सेन्टरमा बरालले असोज ६ मा अपशब्द प्रयोग गरी ड्युटीमा खटिएका...
नर्सिङ संघकी महासचिव थापा भन्छिन् : कोरोनाले निकै गाह्राे पार्दोरहेछ
त्रिभूवन विश्व विद्यालय टिचिङ अस्पतालको कोभिड वार्डका नर्सिङ सुपरवाइजर र नेपाल नर्सिङ संघकी महासचिव नर्वदा थापा महामारी प्रारम्भका दिनदेखि नै सेवारत थिइन् । अस्पतालको जिम्मेवारीदेखि नर्सका समस्या समाधानका लागि उतिकै खट्नुपर्थ्र्यो । यस अवधिमा उनका थुपै सहकर्मी संक्रमित भइसकेका...
म सोफिया प्रधान। कोभिड नर्सको रुपमा वीर अस्पतालमा कार्यरत छु। कोरोना महामारीको पहिलो दिनदेखि नै मैले कोरोनासँग लडिरहेका बिरामीहरूको सेवा गर्ने अवसर पाए। चिनबाट संक्रमण फैलिएको खबर आउन आइरहेको थियो। रोग बिस्तारै बिभिन्न देशमा फैलिँदै गयो। र, जहाँ फैलियो...
अहिले म ३७ वर्षकी भएँ। १४ वर्षदेखि स्टाफ नर्स भएर काम गरिरहेकी छु। सुरुमा एक वर्ष मोरङको एउटा निजी अस्पतालमा काम गरेँ। त्यसपछि लोकसेवा दिएर २०६५ सालमा सरकारको छैठौं तहमा नाम निकालेँ। सात वर्षदेखि पर्सामा रहेको नारायणी अस्पतालमा काम...
बुटवलकी २५ वर्षीया हेमा पौडेलको यसपालि तिहार खल्लो हुनेछ। फेरि, तिहार खल्लो भन्दा ‘जुठो परेको’ वा ‘दाजुभाइ नै नभएको’ वा ‘विदेशमा होलान्’ भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ। उनी स्वदेशमै छिन् र उनको भाइ पनि स्वदेशमै छन्। तर, भाइटिका भने गर्न...
एक नर्स जसले आठ शिशुको हत्या गरिन्
ब्रिटेनकी एक नर्समाथि आठजना शिशुको हत्या तथा अन्य १० शिशुको हत्या प्रयास गरेको आरोप लागेको छ। ब्रिटेनको चेस्टर अस्पतालमा कार्यरत ३० वर्षीया नर्स लुसी लेटबीमाथि आठजना नवजात शिशुको हत्या गरेको आरोप लागेको हो। प्रहरीले लेटबीलाई पक्राउ गरेको छ। लेटबीलाई...
तिलोत्तमा नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय नर्सिङ्ग सेवा कार्यक्रम सुरु गरेको छ । ‘एक विद्यालय ः एक नर्स’ कार्यक्रमलाई तिलोत्तमा नगरपालिकाले १२ जना स्टाफ नर्स नियुक्त गरेर अघि बढाएको हो । विद्यालयमा बालबालिकाको उपस्थिति नियमित गराउन र उनीहरूको नियमित स्वास्थ्य...
कोरोनाबाट झापामा एक स्वास्थ्यकर्मीको मृत्यु भएको छ । यसअघि एक चिकित्सक, २ स्वास्थ्यकर्मीसहित ४ नर्सको ज्यान कोरोनाबाट गइसकेको छ । यसअघि मृत्यु भएको नर्सहरु अवकास प्राप्त थिए । कार्यरत नर्सकै ज्यान गएको पहिलोपटक हो । पछिल्लोपटक मृत्यु हुनेमा दमक...
कोरोना केही होइन भन्नेहरु पनि अहिले आफूले भोगेपछि मात्रै कोरोना के हो भनेर थाहा पाउन थालेका छन्। ‘जबकि अरुलाई पर्दा केही होइन, निको हुन्छ भन्न जति सजिलो छ, त्यति आफूलाई पर्दा नहुने रहेछ। कोरोनाको लक्षण भएपछि झन् गाह्रो हुने...
दशैमा घरजाने रहर कसको नहोला र? तर परिस्थितिले प्रतिकूल छ । अध्यायन तथा रोजगारीका सिलसिलामा उपत्यकाबाहिरबाट आएर बसोबास गर्नेहरु पनि धेरै घर फर्किन पाएका छैनन् । यातायात सहज नभएर रोगको डर विभिन्न कारणले । भक्तपुर नै घर भएकी स्टाफनर्स...
नेपालमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमणबाट नर्सको मृत्यु भएको छ। नेपाल नर्सिङ संघको आजीवन सदस्य रहेकी विद्या जोशीको ७० बर्षभन्दा बढी उमेरमा मृत्यु भएको हो। शुक्रबार पाटन अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको संघको प्रवक्ता कल्पना श्रेष्ठले बताइन्। श्रेष्ठकाे अनुसार वीर...
चीनको उहान सहरमा कोेभिड–१९ का बिरामी देखिन थालेपछि विश्वभर यस रोगको चर्चा हुन थाल्यो। यो रोग सम्बन्धी औषधि रिर्सच गर्ने र आफ्नो देश सुरक्षित राख्नको लागि अघिकांश देशले लकडाउन गरेका थिए। चीन जस्तो शक्तिशाली देशले कोभिड–१९ को उपचार ल्याउने...
संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारको सिफारिसमा विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्‌याउने व्यक्ति,व्यक्तित्व राष्ट्रपतिबाट विभिन्न मानपदवी, अलंकार र पदकबाट विभूषित हुने गरेका छन्। सरकारले हरेक वर्ष योगदानका आधारमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्दै आएको छ। यसबर्ष कोरोना भाइरसको महामारीमा फ्रन्टलाइनमा रहेका...